Disk ကိုပုံရိပ်များ | November 2019
အဓိက Disk ကိုပုံရိပ်များ
တစ်ဦး bootable USB မှတ်-ချောင်းကိုကနေပုံတစ်ပုံကိုအောင်လုပ်နည်း
နေ့သည်ကောင်းသော။ ကနေပြီးတော့သူက boot လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေခဲ့ကြောင်းဤမျှလောက်များစွာသောဆောင်းပါးများနှင့်လဲ tutorial မှာတော့များသောအားဖြင့်, ထိုချောင်းကိုအပေါ်ချော image ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (များသောအားဖြင့်က ISO) ကိုဖော်ပြရန်။ အမည်ရတစ် bootable USB မှတ်-ချောင်းကိုကနေပုံတစ်ပုံ၏ဖန်ဆင်းခြင်းအရာရာပဲအလုပ်လုပ်တယ်အမြဲမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ပြောင်းပြန်ပြဿနာနှင့်အတူ ... အမှန်မှာအဲဒီ ISO format နဲ့ disk တွေ၏ပုံရိပ်များ (CD / DVD ကို), တစ်ဦး flash drive ကိုအဘို့အကြောင်းအများစုအစီအစဉ်များအတွက် ima format နဲ့သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပါသည် (IMG, လျော့နည်းလူကြိုက်များပေမယ့်သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်) ။
Windows နဲ့တစ်ဦး bootable disk ကိုမီးမရှို့ဖို့ကိုဘယ်လို
မင်္ဂလာပါ သငျသညျကို install သည့်အခါအတော်လေးမကြာခဏ Windows ကို (ကယ့်ပုံပဲပေမယ့်မကြာသေးမီနှစ်များတွင် ပို. ပို. တစ် bootable USB drive ကို install လုပ်ဖို့အသုံးပြု,) Boot တက် disk တွေနှုနျးဖို့ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ PC မှာဒီနည်းလမ်းကို sypyatsya အမှားတစ်ဦးကို USB drive ကနေသို့မဟုတ်လျှင် install လုပ်ပါနှင့် OS ကိုရည်ရွယ်သည်မဟုတ် support မပါဘူးဆိုရင်ဒီ disc ကိုဥပမာ, ရန်လိုအပ်ပေမည်။
https://termotools.com my.termotools.com © Disk ကိုပုံရိပ်များ 2019